शुक्राणु को मात्रा बढाउनका लागि घरेलु उपचारहरू। - Varient - News Magazine
Jul 23, 2021 - 14:16
पुरुषमा पनि बांझोपन हुन्छ जसलाई नार्मद वा नपुंसक पनि भन्ने गरिन्छ। वास्तवमा, पुरुषहरूका केही गलत बानीले उनिहरूको शुक्राणु को मात्रालाई कम गर्दछ। तर तपाईं शुक्राणुको मात्रा बढाउन घरेलु उपचार गर्न सक्नुहुन्छ। यसको पछाडी धेरै चोटि तपाईंको पार्टनरसँग यस बारेमा आपसी असहमति पनि हुन सक्छ। जसले गर्दा झगडा हुन सक्छ।
हामी तपाईंलाई जानकारी गराउँदैछौ कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का अनुसार, गर्भवती हुन र स्वस्थ बच्चालाई जन्म दिन एक महिलालाई (१५ मिलियन स्पर्म पर एम एल) चाहिन्छ। स्र्पम १० मिलियन पर एम एल भन्दा तल वा कम भएमा त्यसले असामानता निम्त्याउँछ, जसले गर्दा पुरुषको शुक्राणु गणना वा शुक्राणु मात्रा कमि भएको हुन्छ। पुरुषको वीर्यमा रहेको शुक्राणुको कुल संख्यालाई शुक्राणु गणना भनिन्छ। प्रजननको क्रममा शुक्राणुको गणना गुणस्तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
शुक्राणुको संख्या वा मात्रा बढाउने घरेलु उपचारहरु
१. निश्चित रूपमा व्यायाम र र्पयाप्त निन्द्रा लिनुहोस ।
धेरै अध्ययनहरूले यो देखाएको छ कि व्यायामले तपाईंको वजन घटाउन मद्दत गर्दछ। धेरै व्यक्तिहरूमा मोटोपनाले पनि शुक्राणु गणनाको कमीलाई निम्त्याउँछ। यस बाहेक तपाईको निन्द्राको अभावले पनि शुक्राणुमा कमी ल्याउँछ। पुरुषहरूमा शुक्राणु संख्या वृद्धि गर्न, दैनिक ५० मिनेट व्यायाम आवश्यक पर्दछ यसका साथै तपाईं दैनिक कम्तिमा पनि ७ वा ८ घण्टा सुत्नु जरुरि हुन्छ।
२. र्डाक चकलेट वा गाढा कलरको चकलेट खानुहोस ।
डार्क चकलेटमा एन्टिअक्सीडन्टको साथमा एमिनो एसिड पनि मिसाइएको हुन्छ। यसले पुरुषहरूको शुक्राणु गणनालाई वृद्धि गर्दछ साथै उनीहरूमा उर्जा प्रसारण पनि कायम गर्दछ। यसले स्वतन्त्र रेडिकलहरू हटाउन मद्दत गर्दछ जसले पुरुषको उर्वरतालाई असर गर्दछ। तर धेरै चकलेट नखानुहोस्, किनकि यसले तपाईंको तौल बढ्न पनि सक्छ, जसको कारणले शरीरको सेक्स हार्मोन, जसलाई टेस्टोस्टेरोन भनिन्छ, कम गर्न सक्छ। डार्क चकलेटको एक टुक्रा एक दिनको लागि पर्याप्त हुन्छ। चकलेट जति गाढा हुन्छ, त्यतीनै स्पर्म बढाउँन मद्दत गर्दछ।
३. तनाव कम गर्नुहोस् ।
तनावले तपाईंको शरीरको सोच्ने क्षमतालाई कम गर्दछ। यस कारणले गर्दा पनि ऊर्जा मा कमी आउँछ। तनावले तपाईलाई मानसिक बिरामी बनाउँछ, जसले चिन्ता बढाउछ। तनाव कम गर्न स्वस्थ आहार खानुहोस्, नियमित व्यायाम गर्नुहोस् र त्यो काम गर्नुस जुन तपाईंलाई रमाईलो लाग्छ। यी सबैले तनाव व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्दछ। गम्भीर तनाव वा चिन्ताबाट ग्रस्त पुरुषहरूका लागि, डक्टर सँग सल्लाह लिन पनि सकिन्छ।
४. अनारको रस वा जुस पिउनुहोस् ।
यस्ता धेरै पुरुषहरू हुन्छन जो शारिरिक रुपमा स्वस्थ हुन्छन् तर पनि नपुंसकको वा बाझोपनको शिकार हुन्छन् र उनिहरूमा क्रमशः स्पर्मको अभाव हुन्छ। यसलाई रोक्नको लागि तपाईंले सुत्नुभन्दा ३ घण्टा अघि ताजा अनारको रस पिउनुपर्दछ, यसले तपाईंको स्पर्म काउन्ट बढाउछ। यसलाई नियमित रूपमा पिउँनु भयो भने तपाई यो समस्याबाट बच्न सक्नुहुन्छ ।
५. धुम्रपान रोक्नुहोस् ।
धुम्रपानको निरन्तर उपभोगले शुक्राणुको संख्या कम हुने गर्दछ। २०१६ साल मा गरिएको एक अध्ययनमा ६००० व्यक्तिहरू सहित २० अन्य प्रकारका अध्ययनहरूका नतीजाहरूको परिक्षण गरिएको थियो। यस अध्ययनमा यो पत्ता लागेको थियो कि निरन्तर धुम्रपान गर्ने पुरुषहरूमा शुक्राणुको संख्या कमि हुने गरेको पाईएको थियो।
६. मद्यपान वा रक्सी पिउन छोड्नुहोस ।
जब कुनै व्यक्ति कुनै पनि प्रकारको औषधि वा मद्यपान लिन्छ, यसले स्पर्म काउन्टलाई घटाउन सक्छ। अत्यधिक रक्सीको सेवनले पनि टेस्टोस्टेरोनको स्तर र शुक्राणुको गुणस्तर मात्रा कम गर्दछ। मद्यपानले गर्दा यौनउत्तेजना कमि हुने र पुरुष मा नपुंसकता वा वाझोपन पैदा गर्न सक्छ।
७.पालक को उपभोग वृद्दि गर्नूहोस ।
हामीलाई थाहा छ कि पालकमा फोलिक एसिड हुन्छ, जसले शुक्राणु संख्या बढाउन मद्दत गर्दछ। यसले शरिरलाई आवश्यक पौष्टिक तत्वहरू समावेश गर्दछ। यसले स्वस्थ शुक्राणुको उत्पादनमा मद्दत गर्दछ। जब शरीरमा फोलिक एसिडको अभाव हुन्छ तब अस्वस्थ शुक्राणुहरू हुर्कन्छन्। जसको कारणले, शुक्राणुहरूलाई महिलाको अण्डकोषहरूमा पुग्न कठिनाई हुन्छ।
अश्वगन्धा नेपालमा प्राचीन कालदेखि नै प्रयोग हुँदै आएको छ, वास्तवमा यो धेरै प्रकारका यौन रोगका धेरै उपचारको लागी प्रयोग गरिन्छ। भारतमा सन २०१६ मा गरिएको एक परिक्षण मा ४६ पुरुष हरुलाई दैनिक ६७५ मिलि गा्रम ९० दिन सम्म लगातार अश्वगन्ध सेवन गराउँदा उनिहरुको शुक्राणुको संख्या १६७ प्रतिशतले बढेको पाईएको थियो। यसरि तपाईं यी उपायहरू अपनाएर पनि तपाईंको शरीरमा शुक्राणु गणना बढाउन सक्नुहुन्छ।
यौन क्षमता वा सेक्स स्टामीना बढाउने व्यायामहरु।
शारिरिक शक्ति बढाउनको लागि घरेलु उपायहरु।